Baanka Aduunka oo $2 Milyan dollar ku taageeray dhismaha Isgaarsiinta Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Baanka Aduunka ayaa heshiis tijaabo ah la galay wasaaradda Isgaarsiinta iyo Boostada Soomaaliya.
Sida heshiiskani dhigayo, Baanka Abuunka ayaa lacag gaareysa $2 Million oo dollar ugu deeqay wasaarada isgaarsiinta iyo boostada dowlada Federaalka ah ee Somaaliya, waxaana dhinaca Somalia u saxiisay wasiirka isgaarsiinta iyo boostada, Maxamed Aadan Ibraahim dhinaca Baanka Aduunka uu u saxiisay Tim Kelly oo ah madaxa qaybta isgaarsiinta ee Baankaas.
Heshiiskaan oo uu goobjoog ka aha goob joog ka ahaa garyaqaanka guud ee dowlada Soomaaliya, Cismaan Cilmi Guuleed ayaa looga gol leeyahay sidii loo hormarin lahaa Isgaarsiinta Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale heshiiskaan goobjoog ka ahaa deeq bixiyaasha iyo khuburo caalami ah oo dhanka isgaarsinsta ku takhasusay.
Wasiirka isgaarsiinta iyo boostada, Maxamed Aadan Ibraahim oo kulankaasi ka hadlay ayaa aad u soo dhaweeyey heshiiskas oo uu ku tilmaamay mid taarikhi ah sidoo kale u mahad celiyey hayada bankiga aduunka taageerada ay bixisay.
“Maanta halkan ku saxiixeynaa heshiis dhexmaraya Bankiga aduunka iyo wasaarada isgaarsiinta iyo boostada Somalia,marka waxan rabaa inaan u mahad celiyo Tim Kelly oo ka socda bankiga aduunka iyo garyaqaanka guud ee wadankeena oo saaka nala jooga,waana markii ugu horeysay oo uu ka qaybgalo shir lagu saxiisayo heshiis dhexmaraya Somalia iyo hay’adaha kale ee aduunka” ayuu yiri wasiirku.
Tim Kelly oo ah madaxa qaybta isgaarsiinta ee Bankiga Aduunka ayaa sidoo kale u mahad celiyey wasiirka iyo ka soo qayb galayaasha shirka waxaa xusay in isgaarsiinta Soomaaliya ay qayb wayn ka qaadato dhaqaalaha dalka farxad weyn ay u tahay in bankiga aduunka oo qayb ka qaato horumarinta isgaarsiinta Soomaaliyeed.
“Heshiiskan aynu maanta saxiisnay waxaa lagu deeqay wasaarada isgaarsiinta iyo boostada Soomaaliya lacag gaareysa $2Million oo lagu taageerayo dhismaha qaybta isgaarsiinta, sidoo kale noqon doonta talaabada kowaad oo lagu hiigsanayo wada shaqeyn wanaagsan mustaqbalka dhow”ayuu yiri Tim Kelly.
Agaasimaha guud ee wasaarada isgaarsiinta iyo boostada Soomaaliya, Axmad Xaaji Cabdi oo warysi siinayey warbaahinta qaranka ayaa wuxuu faah faahin ka bixinayey heshiiskaasi.
“Waxaa heshiiskaasu yahay heshiis hordhac u ah heshiisyo kale oo so socda oo dowlada Soomaaliya gaar ahaan wasaarada isgaarsiinta iyo boostada lagu caawinayo in ay horumariso qaybta isgaarsiinta casriga ah ee ICT-ga, waana grant oo macnihii waa lacag aan dowlada Somalia dayn ku ahayn, Insha allah waxaan rajeyneyna in heshiiskan umadda Soomaaliyeed faa’ido badan in ay ugu jirto” ayuu yiri Agaasimuhu.
Heshiiksan taageerada ah oo muddo 2-sano ah socon doonaan ayaa waxaa uu bilow u noqon doonaa heshiiyo balaaran oo lagu taageri doono nidaamka isgaarsiinta dalka si ay bulshada Soomaaliyeed oga faa’ideystaan adeegyadaasi.
Sawirro: Roob xalay hooray oo boholo ka sameeyey Muqdisho